उपत्यकाका ७१ ठाउँमा कोरोना संक्रमण, कहाँ कहाँ भेटिए संक्रमित ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
उपत्यकाका ७१ ठाउँमा कोरोना संक्रमण, कहाँ कहाँ भेटिए संक्रमित ?
२०७७, २५ असार बिहीबार १०:३२ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको बागेश्वरीका एक पुरुषको साताअघि मृत्यु भयो । पीसीआर परीक्षण गर्दा मृतकको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । अस्पतालका चार जना कर्मचारी र मृतकका श्रीमतीको पीसीआर रिपोर्ट भने पोजिटिभ आयो । संक्रमित कर्मचारीहरू दुवाकोटस्थित केएमसी अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् ।
मृतककी श्रीमती भने घरमै आइसोलेसनमा बसेर श्रीमान्‌को काजकिरिया गरिरहेकी छन् । ‘अस्पताल भर्ना भएको १२ औं दिनमा श्रीमान्‌को मृत्यु भयो, हामी अस्पतालबाहेक कहीं गएका थिएनौं, उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि उहाँकै स्याहार गर्ने मलाई भने कोरोना देखियो,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, मंगलबार काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालका एक चिकित्सक संक्रमित भएको रिपोर्ट आयो । उनी न विदेशबाट आएका हुन् न त विदेशबाट आएकासँग घुलमिल भएका थिए । ‘म अस्पतालबाट घर, घरबाट अस्पतालबाहेक कहीं गएकै थिइनँ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘पीसीआर गर्दा पोजिटिभ देखियो ।’
ललितपुर चापागाउँका एक पुरुषमा कोरोनाको कुनै लक्षण छैन । आफूलाई कहाँबाट संक्रमण सर्‍यो भन्ने उनले अड्कलसमेत काट्न सकिरहेका छैनन् । ‘मलाई कोरोनाको लक्षण छैन तर रिपोर्टचाहिँ पोजिटिभ देखिएपछि पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा छु,’ उनले भने ।
भक्तपुर, बालकोटका आमा–छोरामै संक्रमण देखिएपछि पाटन अस्पतालमा उपचाररत छन् । छोरालाई कोरोनाको लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो । आईसीयूमा केही दिन उपचार गरेर छोरालाई जनरल वार्डमा सारिएको छ । आमाको रिपोर्ट पनि मंगलबार पोजिटिभ आएको हो । ‘छोरा केही दिनअघि एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा कर तिर्न गएको थियो, केही दिनपछि ज्वरो र खोकी देखियो,’ ती महिलाले भनिन्, ‘सुरुमा सिभिल अस्पताल लग्यौं । ज्वरो कम भएपछि त्यही दिन घर फर्कियौं । भोलिपल्ट पाटन अस्पताल गएर पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो ।’
ट्राभल हिस्ट्री नभएका उनीहरूजस्तै सामाखुसीका एक पुरुषले गाउँ फर्कन ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर पाटन अस्पतालमा पीसीआर गराएका थिए । उनमा कोरोनाको केही लक्षण थिएन तर मंगलबार टेकुस्थित इपिमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का कर्मचारीले कोरोना देखिएको भन्दै अस्पताल जान तयारी अवस्थामा बस्न भन्दै फोन गरेपछि झस्किए । ‘त्यसपछि घर बस्न सक्ने अवस्था भएन, सबै आत्तिए,’ उनले भने । २२ दिनअघि पाटनमा उनकी श्रीमती सुत्केरी भएकी थिइन् ।
उनीसँगै दुवाकोटको केएमसी अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्न एम्बुलेन्समा नैकापबाट आएकी एक युवती पनि थिइन् । उनी त नैकापबाट बाफलसम्म आएको बाहेक कहीं नगएको दाबी गर्छिन् । ‘थाइराइड चेकअप गर्न अल्का अस्पताल जाँदा पीसीआर गर्न पाटन अस्पताल पठाएको थियो, रिपोर्ट पोजिटिभ आएछ,’ उनले भनिन् ।
माथि उल्लेख गरिएका पात्रहरूको लकडाउनयता आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर कतै गएको इतिहास छैन तर उनीहरू संक्रमित भएका छन् । सोमबार र मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका उनीहरू आइसोलेसनमा छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकु (ईडीसीडी) ले उनीहरूलाई ट्राभल हिस्ट्री नभएका संक्रमितको सूचीमा राखेको छ ।
पछिल्ला तीन दिन भेटिएका १ सय ५ जना संक्रमितको ठेगाना विश्लेषण गर्ने हो भने टोलटोलमा कोरोना संक्रमण फैलिएको देखिन्छ । ईडीसीडीका अनुसार आइतबारसम्म उपत्यकाका १२ ठाउँका स्थानीयमा ट्राभल हिस्ट्री नै नभएको पाइएको छ । ‘पछिल्लो तीन दिनमा यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ,’ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटिएका एक कर्मचारीले भने, ‘विदेशबाट आएका भन्दा कतै नगएका व्यक्तिमा संक्रमण बढेको छ ।’
ईडीसीडीले तीनकुने, कपन, भोलाछें, खुसिबु, कागेश्वरी, नख्खु, मैतीदेवी, बोडे, कोटेश्वर, प्युटार, टोखा र शंखमूलमा ट्राभल हिस्ट्री नभएका संक्रमित भेटिएको भन्दै नमुना परीक्षणलाई व्यापक बनाएको छ । ‘सबैको चासो उपत्यकामा कुन ठाउँमा देखियो भन्ने छ, पछिल्लो समय संक्रमण देखिएको टोल–टोलमा नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ,’ डा. पाण्डेले भने ।
ईडीसीडीले शंखमूलका १४७, कपनका १४०, मैतीदेवीका २ सय, विमानस्थलका १६९ कर्मचारीको स्वाब संकलन गरेको छ । यसको रिपोर्ट भने आउन बाँकी छ । बिहीबार भक्तपुरको भोलाछें र कागेश्वरी मनोहरामा परीक्षण गर्ने योजना रहेको ईडीसीडीले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा दिनमा २० जनाभन्दा बढी संक्रमित हुँदा पनि सर्वसाधारणले सावधानी नअपनाएकामा चिकित्सकहरू चिन्तित छन् । ‘ट्राभल हिस्ट्री नभएका मानिसलाई संक्रमण देखिएपछि समुदायमा विस्तार भएको त होइन भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ,’ टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बाँस्तोलाले भने, ‘पहिला स्वास्थ्यभन्दा पैसा ठूलो होइन भनेर घरमै बसे । अब पैसाभन्दा ठूलो स्वास्थ्य होइन भनेर हेलचेक्य्राइँ गरेर निस्कन थालेका छन् । स्वास्थ्य र पैसा दुवै ठूलो हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । संक्रमण कसरी फैलिन्छ ? भन्ने बच्चादेखि बूढाबूढीलाई थाहा छ । सबै सचेत हौं ।’
काठमाडौं बाहिरबाट आउनेलाई घरबेटीले परीक्षण गर्न पठाउँदा, शल्यक्रिया गर्ने बिरामी, अदालत लैजानुपर्ने कैदी बन्दीको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना बढेको उनले बताए । कान्तिपुरदैनिकबाट